Hordhac: Chelsea vs Fulham - Blues Oo Kaalinta 4aad Xaqiijisan Karta, Rikoodhada Labada Kooxood Iyo Shaxaha Macquulka Ah - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaHordhac: Chelsea vs Fulham – Blues Oo Kaalinta 4aad Xaqiijisan Karta, Rikoodhada Labada Kooxood Iyo Shaxaha Macquulka Ah
Hordhac: Chelsea vs Fulham – Blues Oo Kaalinta 4aad Xaqiijisan Karta, Rikoodhada Labada Kooxood Iyo Shaxaha Macquulka Ah
May 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 2
Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge waxay ku qaabbilaysaa Fulham, iyadoo raadinaysa guul ay ku xaqiijisato kaalinteeda afraad ee horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, isla markaana ay lix dhibcood kaga hormarto naadiga kaalinta shanaad ku jira ee West Ham United oo Isniinta ciyaari doonta.
Blues oo barbarro 1-1 ah Salaasadii lasoo gashay Real Madrid ayaa waxay ku dedaali doontaa in ay jidka guusha kusoo noqoto ka hor inta aanay Arbacada martigelinin Real Madrid oo ugu imanaysa Stamford Bridge, waxaana la filayaa in tababare Thomas Tuchel uu isbeddelo ku sameeyo safkiisa oo uu nasiyo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdiisa.
Fulham ayaa iyaduna ciyaartii ugu dambaysay waxay barbarro ay guul ugu qalmaysay la gashay Arsenal, waxayse maanta u baahan yihiin saddex dhibcood oo sabab ugu noqda in ay ka badbaadaan heerka labaad oo ay khatar ugu jiraan in ay u dhacaan.
Chelsea lagama badin dhamaan 18kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee ay Fulham ku qaabbishay garoonkeeda, waxaanay badisay 10 kulan iyo 8 ay barbarro gashay. Fulham oo ku badisa Stamford Bridge waxa ugu dambaysay October 1979.
Fulham waxay guuleysatay hal mar oo kaliya dhamaan 29kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League ah ee ay iska hor yimaaddeen Chelsea, waxaanay ciyaartaas guushu ahayd March 2006 oo ay garoonka Cottage ku heshay saddexda dhibcood. Kulamada kale, waxa laga badiyey 18 halka 10ka kalena ay barbarro gashay.
Fulham wax guul ah may helin 23kii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee kulamada London derby. 18 ayaa laga badiyey 5ta kalena barbarro ayay galeen. Ciyaar London derby ah oo ay badiyaan (Waa kooxaha ay ka wada dhisan yihiin magaalada London ee Arsenal, Chelsea, West Ham, Tottenham, Crystal Palace, iwm), waxa ugu dambaysay January 2014 oo ay West Ham kaga adkaatay 2-1. Laakiin Fulham lagama badin saddexdii kulan ee ugu dambeeyey ee London derby ah, waxaanay barbarro la gashay Fulham, Crystal Palace iyo Arsenal.
Chelsea hal mar oo kaliya ayaa laga badiyey 14 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah oo uu Thomas Tuchel tababare u ahaa. Siddeed ayay badiyeen shan marna barbarro ayay galeen.
Goolhayaha Chelsea ee Edouard Mendy ayaa shabaqiisa nadiif ka dhigay oo aan wax goolal ah laga dhalinin 15 kulan oo ka mid ah 27 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah. Kaliya Ederson oo Man City ah oo 17 ciyaarood aan waxba laga dhalin ayaa ka horreeya.
Ciyaarta: Chelsea vs Fulham
Tartanka: Horyaalka Premier League, kulamada 34aad
Garoonka: Stamford Bridge.
Chelsea waxa dhaawac kaga maqan Mateo Kovacic oo muruqa wax ka qaba, diyaarna uma aha ciyaartan. Laakiin laacibka reer Croatia ayaa sidoo kale shaki ku jiraa in uu taam u noqon karayo kulanka Real Madrid ee Arbacada.
Antonio Rudiger ayaa sidoo kale dhaawac fudud kaga maqnaanaya ciyaartan.
Dhinaca Fulham, tababare Scott Parker ayaa meesha ka saaray in wax dhaawacyo ah ay kooxdiisu qabto, waxaanay Stamford Bridge tegayaan iyagoo raadinaya guushoodii ugu horreeyey ee ay garoonkaas kasoo gaadhaan tan iyo 1979kii.
Kabtan Tom Cairney ayaa kasoo kabtay dhaawac jilibka ah oo uu muddo dheer ku maqnaa, laakiin Terence Kongolo ayaa horeba ay kooxdu uga saartay liiskeeda maadaama uu xilli ciyaareedka oo dhan dhaawac ku maqnaanayo.
Qoraayaasha laacib been kuma aanan aqoon lkn maanta hanoo sharaxaan sida ey chelsea ugu xaqiijisankarto kaalin afaraad hadii ey maanta badiyaaan waa sida ey noosheegeene
Anigu waxan ahay taageere chelsea ah lkn ma garanayo sida ey maanta hadii ey ciyaarta fullham soo badiso ey kaalinta afaraad ku xaqiijisan karto lkn laacib hadii ey noo sharixi waayaan waa iney raaali gelin kabixiyaan qodobkaas si loo aaamino wararka danbe waa filataa in aad si faahfaahsan uga jawaaabi doontaan